Fanafihana nandamoka – Amoronakona By-Pass: roa lahy maty voatifitra, avotra ny volabe sy ny fiaran’ny Brinks | NewsMada
Nandamoka ! Izay ny azo ilazana ny fikasan-dratsin’ireto jiolahy saika handroba ny fiara orinasa Brinks, saika hametraka vola ao amin’ny Dab (Distributeur automatique de banque), eny Amoronakona, By-Pass, ny asabotsy tolakandro teo. Voatifitry ny zandary ka namoy ny ainy ny roa amin’ireo jiolahy.
Nirefotra indray ny poa-basy nandritra ny fanafihan-jiolahy teny Amoronakona By Pass – Ambohimangakely, ny asabotsy tolakandro teo. Maty voatifitry ny zandary ny jiolahy roa nikasa hanafika ny fiarabe mifono vy an’ny orinasa Brinks. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, tokony ho tamin’ny 1 ora sy fahefany teo ho eo, nisy andian-jiolahy miisa dimy nanatona sy nanambana basy ary nibosesika hiditra an-keriny tao anatin’ny fiaraben’ny Brinks izay hameno vola ao amin’ny Dab an’ny banky iray ao amin’ny toeram-pivarotana solika iray eny Amoronakona By-Pass. Nisy ny fifanjevoana teo amin’ireo jiolahy izay niezaka nibosesika tao anatin’io fiara io sy ny mpamily. Tsikaritr’ireo zandary avy ao amin’ny EP3/FIGN izay teny an-toerana namita iraka hiahy ny fandriampahalemana sy hisoroka izay ratsy mety hiseho amin’iny faritra iny ireo jiolahy nifanjevo tamin’ny mpamilin’ilay fiaraben’ny orinasa Brinks. Nitifitra avy hatrany ireo zandary hiarovana io fiarabe nitondra vola io. Tafatsoaka ilay fiarabe raha maty voatifitra kosa ny jiolahy roa. Tafaporitsaka ireo jiolahy naman’ireto roa lavon’ny zandary ireto.
Tavela ny basy PA iray sy moto BWS…
Nandriaka eran’ny arabe ny ran’ireto jiolahy lavon’ny zandary ireto. Tavela ny moto marika BWS iray niaraka tamin’ny basy PA iray tratra teny amin’ny iray amin’ireto jiolahy ireto miaraka amin’ny bala maromaro. Fotoana fohy taorian’izay, vory haingana teny an-toerana ireo zandary avy amin’ny borigadin’Ambohimangakely sy ireo avy amin’ny vondron-tobim-pileovana Analamanga mpanao ny “Opération Papango” ka lasa niparitaka nikaroka ny toerana nalehan’ilay fiarabe nitondra vola. Fotoana elaela taorian’izay, niantso ny tompon’andraikitra avy any amin’ny orinasa Brinks nilaza fa tonga soa aman-tsara any amin’ny foibeny io fiarabe io ka tsy nisy nipika ny vola nentiny na ariary aza. Avotra soa aman-tsara koa ireo mpiasa nanaraka ity fiarabe nitondra vola ity. Tsy nahomby indray, araka izany, ny fikasan’ireo jiolahy nikasa handroba ny fiarabe mifono vy mpitondra vola an’ny orinasa Brinks noho ny hakingan’ireo zandary mpiana-draharaha nifanehatra tamin’izy ireo. Mitohy ny fikarohana ataon’ny zandary ireo jiolahy tafaporitsaka.